Qatar Airways: Hiorina amin'ny fotony ve izy io?
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Qatar Airways: Hiorina amin'ny fotony ve izy io?
Faniriana ve ny ho tonga toe-javatra tena izy ho an'ireo mpifaninana henjana Qatar Airways ho an'ny Emirates Airline na Etihad Airways miorina any Emirà Arabo, ary fiverenana ho an'ny Golf Airlines any Bahrain?
Ny sidina Qatar Airways dia mamakivaky làlana lava be eny amin'ny habakabaka iraniana sy omani, misy fiatraikany amin'ireo mpivarotra sy fialamboly an'arivony. Ireo firenena mametra ny habakabaka mankany Qatar Airways dia mitombo hatrany Arabia Saodita, Bahrain, UAE ary Egypt mba hampiditra an'i Somalia sy Yemen. Ny firenena hafa dia namarana na nampidina ny fifandraisana diplomatika amin'i Qatar. Ny firenena toa izany dia misy an'i Jordania sy Maldives. Milomano eo anelanelan'ny Bahrain, ny Emirà Arabo Mitambatra sy Arabia Saodita, saika tsy azo atao ny misoroka ny mikasika ny habakabaka
Na izany aza, ny asan'ny Qatar Airways dia mihazakazaka toy ny mahazatra ary tsy misy fanelingelenana amin'ny sidina afa-tsy ireo any amin'ny firenena Qatar Airways dia voafetra tsy hisidina. Ny mpandeha rehetra voadona tany Doha handeha amin'ny fanjakan'ny Saudi Arabia dia samy nahazo fanampiana amin'ny fandaminana ny dia lavitra. Hoy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka: "Ao amin'ny Qatar Airways, ny mpandeha dia mijanona ho laharam-pahamehana indrindra ary hanohy hanome antoka izahay fa hanana dia tsy misy tohiny mankany amin'ny toerana farany nalehany."
Mandritra izany fotoana izany, ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery Qatar Airways dia tena mpandala ny nentin-drazana ary ny CEO CEO Akbar Al Baker dia tsy dia be mpahalala sy niteniteny foana momba ny fanakanana ny fireneny sy ny zotram-piaramanidiny, fa ny sombin-javatra izay lazain'i Saudi Arabia sy ireo mpiara-dia aminy momba ny fifandraisan'i Qatar sy ny famatsiam-bola. ny fampihorohoroana dia nohamarinin'ny manampahefana Qatar. |
Ny minisitry ny raharaham-bahiny Qatar Mutlaq Al Qahtani dia nilaza tamin'ny fikambanana vaovao iraisam-pirenena monina any Qatar Aljazeera ny fireneny fa ny firenena Golfa no nampiantrano ny Taliban "noho ny fangatahan'ny governemanta amerikana" ary tao anatin'ny "politikan'ny varavarana misokatra ho an'i Qatar, hanamorana ny fifanakalozan-kevitra, hanelanelana ary mitondra fihavanana ”. Nanokatra ny “biraon'ny politika” tany Qatar ny Taliban tamin'ny 2013.
Ao amin'ny 2000 Qatar nanambara fa hikatona an Iraka varotra israeliana tany Doha, ary nilaza ny manam-pahaizana sasany tany Israel eTurboNews taona maro taty aoriana dia nitohy ny fifandraisana varotra ankolaka teo amin'ny Fanjakana jiosy sy Qatar.
Tamin'ny fanambarana an-gazety navoakan'ny androany, nanambara tamim-pireharehana ny fisondrotana 22% ho $ 540.00 Million ho an'ny zotram-piaramanidina kintana dimy i Qatar Airways.
Sary iray navoakan'ny vondrona mpanara-dia ny sidina Flightradar24 nampiseho ny zotra voafetra nalain'ny sidina Qatar Airways noho ny fanakanana. Noterena handray fiaramanidina tokana mankany Doha ny fiaramanidina.
Ny tranokalan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia mampiseho fanitsiana kely amin'ny ora sidina mankany Nouvelle Zélande sy Aostralia saingy tsy nampifandray azy ireo tamin'ny “sakana”.
“Betsaka ny sidina Qatar Airways mankany atsimon'i Eropa sy Afrika no mamaky an'i Saudi Arabia. Ny sidina mankany Eropa dia azo inoana fa haverina hamakivaky an'i Iran sy Torkia, "hoy i Flightradar24. "Ny sidina mankany Afrika dia mety mandeha amin'ny alàlan'i Iran sy Oman ary mianatsimo."
Alexandre de Juniac, ny tale jeneralin'ny International Air Transport Association (IATA) dia naneho ny ahiahiny momba ny fanakanana ary niantso ny hisokafana bebe kokoa tamin'ny fivoriana fanao isan-taona IATA farany natao tany Cancun, Mexico. Akbar Al Baker dia nandao ny fivoriana maika hamonjy fodiana amin'ny fiaramanidina manokana hiatrehana ny krizy vaovao.
"Tianay ny hisokafan'ny sisintany, arakaraka ny vao haingana no tsara kokoa," hoy ny sefon'ny IATA tamin'ny mpanao gazety tao Cancun ny alatsinainy lasa teo. ”
Mety misy tsipika mivantana mankany amin'ny rano iraisampirenena i Qatar saingy amin'ny lafiny habakabaka dia saika voahodidin'ny mpifanila vodirindrina tezitra tanteraka.
Qatar dia manana habakabaka kely; voahodidin'ny faritra fampahalalana momba ny sidina (habakabaka) Bahrain ny ankamaroany. Ny lemaka atsimo dia tantanan'i Arabia Saodita raha ny Emira Arabo Mitambatra dia eo amin'ny sisin-tany atsinanana.
Ny lalàna momba ny fiaramanidina sivily dia mifototra amin'ny fifanarahana tany Chicago izay vita sonia hatramin'ny 1944. Manaiky ny fiandrianam-pirenena amin'ny habakabaka izy io - amin'ny ankapobeny dia afaka manapa-kevitra izy ireo hoe iza no hipetraka ary iza no tsy hanaiky.
Na izany aza, nanaiky ireo nanao sonia ny "Fifanarahana Transit" fa ny sidina mpandeha iraisampirenena dia afaka mihoatra ny faritanin'izy ireo amin'ny lalana mankany amin'ny toeran-kafa.
Tsy nanao sonia ny fifanarahana i Saudi Arabia, ka afaka manao araka izay itiavany azy. Saingy i Bahrain sy ny Emirà Arabo Mitambatra dia manana ary noho izany Qatar dia afaka manidina ambonin'izy ireo ara-dalàna.
Qatar Airways dia toa manandrana manaparitaka volo ny habakabaka araka izay azo atao. Taloha, ny mpandeha manidina Qatar dia tokony hanatona an'i Doha namakivaky ny UAE. Saingy ireo sidina ireo amin'izao fotoana izao dia misoroka ny UAE amin'ny alàlan'ny fanaovana fandaharam-pianarana lalana akaikin'ny Hoala Persika amin'ny alàlan'i Iran.
Fa ny fivoahana avy eo amin'ny habakabaka mankany Qatar dia midika hoe manidina mamakivaky ny faritanin'i Bahrain. Izay indrindra no ataon'ireo fiaramanidina Qatar, na dia iray aza, lalantsara be mpandeha ankehitriny, manome lalana haingana ny sidina mankany Iran.
Ary ny nofy ratsy an'i Doha dia mety ho tanteraka. Tamin'ny Alarobia, namoaka toromarika momba ny sidina vaovao ny manampahefana ao an-drenivohitr'i Bahama, Manama. Amin'izao fotoana izao, ny sidina Qatar dia manohy miainga avy any Doha, miakatra mivantana mankany Bahrain, toa manidina manoloana ny torolàlana.
Mbola ho hita eo ny fomba fandraisan'i Bahrain izany. Na hanodina ny masony izy ireo raha toa ka mikatona amin'ny lalana fohy iray amin'ny alàlan'ny habakabany i Qatar. Na raha manery ny iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra eran'izao tontolo izao i Bahrain.